Real Madrid oo dhameystirtay qorshihii suuqa kala iibsiga Bisha Janaayo, - Jazeera FM
Real Madrid oo dhameystirtay qorshihii suuqa kala iibsiga Bisha Janaayo,
December 6, 2017 admin featured
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay soo gabagabeyneyso qorshaheeda suuqa kala iibsiga ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga.
Kooxda heysata horyaalka Spain iyo kuwa yurub ayaa u baahan inay cusbooneysiiso ka dib markii ay isbedeshay qeybtii hore ee xilli ciyaareedka taasoo keentay inay si fiican uga dhex muuqdaan horyaalka La Liga.
Sida laga soo xigtay wargeyska Marca, madaxweynaha Los Blancos Florentino Perez ayaa kiciyay diyaar garoowgii suuqa kala iibsiga ee suuqa kala iibsiga ka dib markii uu kulan la qaatay agaasimaha guud Jose Angel Sanchez bilowgii isbuucaan.
Tababaraha Zinedine Zidane ayaa lagu soo dhaweyn doonaa ugu yaraan labo ciyaartoy oo cusub, waxaana la sheegayaa in goolhayaha iyo weeraryahan uu sheegay inuu sare uqaaday liiska xiddigaha Faransiiska ah.
Madrid ayaa sideed dhibcood ka dambeysa Barcelona ka dib 14 kulan oo horyaalka ah, waxaana ay sidoo kale ku dhameysan doonaan kaalinta labaad ee Tottenham Hotspur tartanka Champions League.
The post Real Madrid oo dhameystirtay qorshihii suuqa kala iibsiga Bisha Janaayo, appeared first on Goolasha.net.
← Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo sheegay in uusan isku murjineyn xalaada xidiga ,,,,,,
Wax Ka baro Sida Loogu Kala Guuleystay Tartanka Kubadda Cagta Ee Maamul Goboleedyada: →